Indlela Yokuphila yaseNtwana
Abesifazane ikakhulukazi bahlaziya futhi babonakalisa ama-ethos angashintshi eNtwana. Izindlela zabo zokugqoka, izinto abazikhiqizayo kanye nemikhuba abayenzayo baqinisa indima yabo njengabasekeli bezinkolelo nabasekeli bezomnotho zasemaphandleni lapho bebhekene nokuhlala kwamadolobhana kanye nokungabikho kwamadoda abo, abaningi babo abathintekayo ekuthumeni kwabo uhlelo lokusebenza.
Njengoba ukuhlolwa okusheshayo kwalesi sigameko esingaqondakali sikhombisa, ubunikazi babo njengeqembu elihlukile lezamasiko lihlanganiswe ngokungaqondakali kokubili emlandweni ode kakhulu namuva weNingizimu Afrika.
Nakuba isimo se-frontal apron (thetho) esigqokwe bobabili abakwaNtwana nabesifazane basePedi bafana, kuhluka ngokusho komhlobiso. Ngokungafani namaphilisi e-Pedi, ahlanganiswa namaphethini aqoshiwe, ubuso bezintambo ze-Ntwana ngokuvamile bubushelelekile ngaphandle kokuba khona kwezinhlobo ezihlotshisiwe zokuhlobisa.
Ekhiqizwa ngama-goatkin noma nge-oxhide ngezikhathi ezithile, ama-aprons angaphambili nangemuva afanekisela isigaba esibaluleke kunazo zonke ekuphileni komama wesifazane waseNtwana: isimo sakhe somshado futhi ngenxa yalokho ukwamukelwa kwakhe njengomuntu omdala emphakathini.
Iphosta yangaphambili lihlotshiswe kancane; ukuhlobisa kwabo okuvame ukuphindaphindiwe yi-sehlora ('umsila wesikwa-squirrel'): i-motif-like like motif emicimbini egciniwe evame ukuhlotshaniswa ubuhlalu obumhlophe ngaphandle, omnyama noma obuluhlaza emibuthanweni yangaphakathi, futhi obomvu nomhlophe phakathi. I-sehlora ibonakala ibaluleke kakhulu eNtwana njengoba ibuyele emiphakathini yabo yendabuko, futhi igqoke ekhanda.
I-front apron (intepa) egqoke ngabesifazane baseNtwana ihlolwe ibe yi-V evimbekile eyakhiwe yi-gap elinezintathu ezihlanganiswe yizibani ezimbili ze-leather (lekobe). Phakathi kwePedi, leli fomu lihunyushwe ngokuthi limelela ubulili besifazane kodwa izazi zeNtwana zikholelwa ukuthi limelela imilenze yangemuva yembuzi.
Bobabili basikisela ubudlelwane nokuzala kwesifazane. Ukugcizelela indima ebantwini besifazane baseNtwana njengababelethi bafumana inhlobo ebonakalayo ku-gimwane noma i-popenyane - idoli lendabuko lokuzala elakhiwe ngokusondeza, uboya nobuhlalu. Amakhono okukhiqiza lawa dololi adluliselwa kumama kuya kwendodakazi.
Amantombazane amancane enza sengathi izidakamizwa zingumfana wezinkabi zabo, ezimenywa ukuba zihlanganyele emncintiswaneni womdanso, umphumela wawo owenza umholi weqembu langaphambili. Abafana abancane bavame ukuhlangana emzini womunye wamantombazane, obeka i-gimwane ngayinye emgqeni.
'Obaba' no 'omama' bakha imigqa emibili ngaphesheya kwamadonki bese bedansa nabalingani babo. Umnqobi, njengoba ehlulelwa umzali, uthola i-goatskin njengengqungquthela. Ngokuvamile abanye abafana baqala umncintiswano wokulwa ukuze baqinisekise umholi wangempela phakathi kwabo.
Amagundane amabala anombala angaphansi kwesigamu esingaphansi kwe-gimwane ngokuvamile ahlelwe emgqeni wendabuko yomfaniswano wendabuko: amaqoqo amabili amhlophe phezulu, alandelwe enye ebomvu, eyodwa eluhlaza okwesibhakabhaka, eyodwa ebomvu futhi ngezinye izikhathi enye ibhande elimhlophe eliphansi.
Lokhu kulungiswa kombala kufana nalokho okugqoke ngabesifazane besifazane baseNtwana abasendlini yabo. Okumhlophe, obomvu nokuluhlaza okwesibhakabhaka noma omnyama yizinto ezijwayelekile phakathi kweNtwana ngenxa yokuhlangana kwabo nezinhlobo zemvelo (njenge-ocher obomvu), okukholelwa ukuthi banegunya lemilingo, lokuphulukisa.
Nakuba izidoli zokuzala zingenalo ukucacisa ngokocansi, ubulili bezinye izigimwane zingase zihlolwe yizimo zamapuloni abo angaphambili nangemuva. Ama-gimwane amantombazane athambekele ekubeni ne-loincloths emigqeni kuyilapho ama-dolls ezinsikazi angabonwa ngamapuloni afana ne-V afana ne-ntepana (ama-aprons angemuva) agqoke amantombazane angabanjwanga eNtwana.
Izici ezinjalo zendabuko ziba yilapho zingavamile kulezidakamizwa ze-gimwane, ngokuphambene nokuhlelwa kwezinto zokuhlobisa ezitholakala kumahlengethwa asanda kukhiqizwa. Lokhu kubangelwa ukuthi i-gimwane ayisasetshenzisiwe ngemifanekiso yamasiko. Kuye kwaba ngcono kakhulu, futhi kuguqulwa noma kuguqulwa ukuze kuhambisane nesifiso sokuhlobisa okuyingxenye yemakethe yayo emhlophe kakhulu.